မလေးရှားပြန်နှစ်ဦးမှာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးထပ်တွေ့၊ အိုင်စီဂျေကို မြန်မာ ပထမဆုံးအစီရင်ခံစာ စတင်၊ စစ်သင်္ဘောပေါ်အရပ်သားငါးဦး ရိုက်ခံရမှု စုံစမ်းဖို့ တပ်ချုပ်ညွှန်ကြား အပါအဝင် မေ ၂၃ မနက်ခင်းထိပ်တန်းသတင်းများ
မလေးရှားပြန်နှစ်ဦးမှာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးထပ်တွေ့၊ အိုင...
23 พ.ค. 2563 - 09:12 น.
(၁) ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာနှစ်ဦးထပ်တွေ့၊ မလေးရှားက ပြန်လာသူတွေဖြစ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်အတြည်ပုလူနာနှစ်ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနက မေ ၂၃ ရက်မနက် ၇ နာရီထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့က အသက် ၂၆ နှစ်နဲ့ အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားနှစ်ဦးဖြစ်ပြီး တီးတိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ အသွားအလာ ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့ကို ကုသမှုပေးမယ့် ဆေးရုံကိုတော့ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
ဒီနှစ်ဦးနဲ့ဆိုရင်မလေးရှားကနေ ပြန်လာတဲ့သူတွေထဲကနေ ပိုးတွေ့လူနာ အရေအတွက် စုစုပေါင်း ၁၁ ဦးရှိသွားပါပြီ။
မလေးရှားအစိုးရက ထိန်းသိမ်းခံ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို စင်းလုံးငှားလေယာဉ်နဲ့ မေ ၁၁ ရက်က ပြန်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ယူအေအီးက ပြန်လာသူတွေထဲကနေလည်း စုစုပေါင်း ပိုးတွေ့လူနာ ၈ ဦးထိ ရှိထားပါတယ်။
မြန်မာမှာ စနေနေ့မနက်ပိုင်းအထိ ပိုးတွေ့လူနာပေါင်း ၂၀၁ ဦးနဲ့ ရောဂါပိုး၁၁၆ ဦးရှိသွားပါပြီ။
အတည်ပြုလူနာတွေအနက် ၆ ဦးသေဆုံးထားပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရဟာ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ပြန်ခေါ်ရာမှာ မနေ့ကထိ စုစုပေါင်း ၂၀၀၁ ဦးကို ခေါ်ဆောင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မနေ့က မေ ၂၂ ရက်မှာ ရန်ကုန်က ဓာတ်ခွဲခန်းနှစ်ခုပေါင်း စစ်ဆေးမှုအရေအတွက်ဟာ ၇၄၀ ခု ရှိခဲ့ပြီး ဒါဟာ ကိုဗစ်စဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် တစ်ရက်တည်းနဲ့ ဓာတ်ခွဲနမူနာအများဆုံး စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ပမာဏလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၂)အိုင်စီဂျေကို မြန်မာ ပထမဆုံးအစီရင်ခံစာ စတင်
ဒီနေ့ မေလ ၂၃ ရက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး အိုင်စီဂျေကို ပထမဆုံး အစီရင်ခံစာတင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမိန့်ချပြီးတဲ့နောက်လေးလအတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို တရားရုံးကို ပြန်တင်ဖို့ အချက်ကြောင့် ခုလို အစီအရင်စာတင်သွင်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာမှာ ပါဝင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုတော့ မြန်မာအစိုးရက ထုတ်ဖော်ပြောကြားတာမရှိပေမယ့် ပြည်တွင်းက လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ နေရပ်စွန့်ခွာသူတွေ ပြန်လည်လက်ခံရေး ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို အဓိကထား ဖော်ပြမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ဒီအစီရင်ခံစာအတွက် လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို တပ်မတော်ဘက်က ပူးပေါင်းကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ တပ်မတော်သတင်း မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောကြားထားပါတယ်။
အိုင်စီဂျေ အရေး မြန်မာဘက်က ဘာဆက်လုပ်ဖို့ ရှိလဲ
အိုင်စီဂျေ - မြန်မာ ပြန်လှန်လျှောက်လဲချက် တင်ရမယ့်ရက် ကြေညာ
ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို အိုင်စီဂျေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာလက တရားစွဲခဲ့ပါတယ်။
အမှုကို ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်ကနေ ၁၂ ရက်အထိ နယ်သာလန်မှာရှိတဲ့ အိုင်စီဂျေတရားရုံးမှာ ကြားနာခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်ခုခံချေပခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ဇန်နဝါရီမှာ မြန်မာက ဆောင်ရွက်ရမယ့် ကြားဖြတ်စီမံချက်လေးချက်ကို ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
အိုင်စီဂျေတရားရုံးထံ လူကိုယ်တိုင် သွားရောက်ဖို့မရှိဘဲ အစီရင်ခံစာကို စာတိုက်ကနေ ပေးပို့ဖို့ရှိတယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးချမ်းအေးက ပြောကြားထားပါတယ်။
(၃) စစ်သင်္ဘောပေါ်မှာ အရပ်သားငါးဦး ရိုက်နှက်ခံရမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ တပ်ချုပ် ညွှန်ကြားထား
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ်အတွင်း စစ်သင်္ဘောပေါ်မှာ အရပ်သား ငါးဦးကို အေအေနဲ့ ဆက် စပ်တယ်ဆိုပြီး တပ်မတော်သားတွေ က ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော် ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင်က ဒီကိစ္စကို အလေးထားပြီး အမြန်ဆုံး စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
နေပြည်တော်မှာ မနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ တပ်မတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
"အရေးယူနိုင်ဖို့အတွက် ဒါ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးတွေ စတင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ပြီးရင် ကျွန်တော် တို့ အနေနဲ့ တည်ဆဲဥပဒေအရ စစ်စည်းကမ်းအရ တိတိကျကျ ကျနော်တို့ အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော်အနေနဲ့ ပြောနိုင်တာကတော့ ကျနော်တို့ ခန ခန ပြောနေတာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး ပြစ်မှုတွေ၊ ပြည်သူလူထုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတင် မကဘူး တရားဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းတဲ့ အကြောင်း အရာတွေ၊ ပြည်သူလူထုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီလို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မူတွေ ရှိခဲ့လို့ရှိရင် တာဝန်ယူမူ တာဝန်ခံမူ အပြည့်နဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်"လို့ သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။
အရပ်သားတေကို ရိုက်နှက်နေတဲ့ အဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကို တပ်မတော်သားတစ်ဦးက ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့တာပါ။
"ဗီဒီယိုတက်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ ရိုက်တာကလည်း ကျွန်တော်တို့ဆီက စစ်သည်တစ်ဦးပဲ ရိုက်တာပဲ။ ဒါ ဘယ်လိုပဲပြောပြော ကျွန်တော်တို့လည်း ခွင့်လွှတ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ ပုဂ္ဂိလကပိုင်း ဆိုင်ရာခံစားချက်၊ Emotion(စိတ်ခံစားချက်)အရ သူတို့လုပ်တာပဲ။ လုပ်တာပဲဆိုတော့ ပြောရမယ်ဆိုရင် တော့ စစ်သည်တွေ သူတို့ရှေ့မှာတင် တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။ စစ်သည်တွေကျခဲ့တယ်။ တချို့ ကိစ္စတွေမှာ မှန်ပါတယ်။ တချို့ကိစ္စတွေမှာ Emotion နဲ့ ဆိုင်တဲ့ဟာတွေ တော်တော်များများ ဖြစ်လေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစစ်သည်က ရိုက်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ သူက အဲဒီဖုန်းပျောက်သွားတယ်။ အဲဒီဖုန်းပျောက် သွားပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အခုလို (ဗီဒီယိုဖိုင်) ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်"လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
အဲဒီအရပ်သားတွေကို အခုအခါ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီး အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ တရားစွဲဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ ဂူတာပြင်ဖြစ်စဉ်ကိုလည်း တပ်မတော်စစ်တရားရုံးက စစ်ဆေးမှုပြီးစီးသွားပြီဖြစ်လို့ ကျူးလွန်သူတွေနဲ့ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေကို ဒီလမကုန်ခင် ထုတ်ပြန်မယ်လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
(၄) ဗြိတိန်ကိုလာရောက်သူတိုင်း နှစ်ပတ် ကွာရန်တင်းဝင်ဖို့ ကြေညာ
ဗြိတိန်နိုင်ငံကို ဇွန်လ ၈ ရက်ကစပြီး လာရောက်သူတိုင်း နှစ်ပတ်ကြာ သီးသန့်ခွဲခြားနေထိုင်ရမယ်လို့ ဗြိတိန်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုကို နှေးကွေးစေဖို့ မိမိအစီအစဉ်နဲ့ အခုလို ၁၄ ရက်ကြာသီးခြားနေထိုင်ဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဗြိတိန်အစိုးရကပြောပါတယ်။
ကွာရန်တင်းစည်းကမ်းမလိုက်နာသူတွေကို ဒဏ်တပ်မယ်လို့ ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။
ကွာရန်တင်း ၁၄ ရက်စည်းကမ်းကို ချိုးဖောက်တဲ့သူတိုင်း ပေါင် တစ်သောင်း ဒဏ်တပ်ခံရမှာဖြစ်ပြီး ဒဏ်ငွေမဆောင်ရင် တရားစွဲဆိုဖို့ရှိကြောင်းနဲ့ လိုအပ်ရင် ဒီထက်ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့ ဝန်လေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
သီးသန့်ခွဲနေထိုင်တာရှိမရှိကို အာဏာပိုင်တွေက အလျဉ်းသင့်သလို စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗြိတိန်ကိုရောက်လာသူတွေဟာ သူတို့ဘယ်နေရာမှာ သီးခြားခွဲနေတယ်ဆိုတာကို အာဏာပိုင်တွေထံ အသိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်ဟာ ဥရောပမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုအများဆုံး ရှိနေပါတယ်။
ဗြိတိန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၃၆,၀၀၀ကျော်နဲ့ ကူးစက်ခံရသူက နှစ်သိန်းခွဲ ရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူပေါင်း ငါးသန်းနှစ်သိန်းခန့်ရှိတယ်လို့ အမေရိကန်ဂျွန်ဟော့ပ်စ်ကင်းတက္ကသိုလ်သုတေသနအရ သိရပါတယ်။
ကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးကတော့ အမေရိကန်နဲ့ ရုရှတို့ဖြစ်ပြီး ရုရှမှာ မနေ့က တစ်ရက်တည်းက ကူးစက်သူ ရှစ်ထောင်ကျော် ထပ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မလေးရှားပြန်နှစ်ဦးမှာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးထပ်တွေ့၊ အိုင်စီဂျေကို မြန်မာ ပထမဆုံးအစီရင်ခံစာ စတင်၊ စစ်သင်္ဘောပေါ်အရပ်သားငါးဦး ရိုက်ခံရမှု စုံစမ်းဖို့ တပ်ချုပ်ညွှန်ကြား အပါအဝင် မေ ၂၃ မနက်ခင်းထိပ်တန်းသတင်းများ